SIDA LOOLA DHAQMO XAYAWAANKA GURIGA HOYGIISA GURIGA - HABABKA - BEERAHA DIGAAGA
Ka takhalusidda xayawaanka duurjoogta dufanka digaagga
Qaar badan oo beeraleyda digaaga ah waxay ogaadaan dhibaatadaas oo kale sida jiirka ama cagaha dufcadda digaaga, taas oo keeneysa khasaare wayn oo dhaqaale ah. Mararka qaarkood ka takhalus iyaga ma fududa.
Qodobkan, hababka wax ku oolka ah ee ka eryidda guriga mid ka mid ah wakiilada walaalahaa da 'yarta ah, feerka, ayaa loo tixgelin doonaa.
Ku saabsan wareegyada
Ka hor inta aanad bilaabin dagaalka ka dhanka ah cayayaanka, bal aynu eegno dhowaan. Ferret waa naas nuujin ah oo ka mid ah qoyska qasdigooda. Waa xayawaan yar oo leh jir dheer (qiyaastii nus mitir) iyo daboolka illaa 20 cm oo dheer, waxaa ku jira xubno gaaban oo gaaban, sidaa darteed jidhku wuxuu u muuqdaa mid isku mid ah. Madaxa - oval, midab leh. Maqaarka waxaa lagu daraa qaab sifo leh qaabka maaskaro madow. Jidhku wuxuu ku daboolan yahay dhar midab ah oo midabyo kala duwan ah - laga soo bilaabo garabka midabka ah ilaa bunka madow (waxaa jira albinos). Gaar ahaan dhuuban iyo dhogor cad - dusha.
Xayawaanku aad ayuu u firfircoon, baqdin, jilicsan. Waxay si sahlan u socotaa geedaha, godka qotada dheer, si fiican u dabbaalan, waxay ku dul socon kartaa dildilaaca dhaadheer.
Ma taqaanaa? Ka sokow xaqiiqda ah in ferrets leeyihiin jir dhaadheer oo dheer, waxay sidoo kale leeyihiin lakab aad u jilicsan, thanks to taas oo ay geli karaan godadka cidhiidhi ah. Sababtoo ah awooddan awgeed, waqtiyo kala duwan qofku wuxuu isticmaalay xayawaan yar oo ka caawinaya dhismaha iyo qalabyada kala duwan. Sidaa darteed, sannadkii 1960kii, wuxuu soo jiitay diyaarinta duulimaadka Boeing-ka si loo soo saaro fiilooyin. Si loo dhigo cable, ferret loo baahan yahay si loo diyaariyo guurka guuritaanka Prince Charles iyo Princess Diana. Ma ahan waqti dheer, xayawaanku wuxuu ahaa mid faa'iido leh oo lagu dhisi lahaa dhismaha weyn ee Hadriyinta.
Xayawaanku wuxuu leeyahay awood gaar ah oo loogu talagalay xayawaanka duurjoogta ah - waa gabi ahaanba kama baqin nin. Sidaa darteed, dhowr millennia, wuxuu xitaa loo hayaa xayawaan. Waa nin caqli leh, wuxuu baran karaa xirfado kala duwan, ma qaadan karo boos badan. Guud ahaan, ferret waa qurux qurxoon oo qurux badan, laakiin beeralayda digaaga ayaa noqon kara ciqaab dhab ah. Xereynta hareeraha guryaha dadka, wuxuu ku dhacaa shimbiraha gudaha (gaar ahaan raali-gelinta digaagga), cuno ukumaha, mararka qaar ka tago coop aad u ba'an. Booqashadiisa wuxuu dhacayaa habeenkii. Inta lagu jiro hal gelinta guriga, wuxuu awoodaa in uu burburo ilaa 15 shimbir.
Waxaad fahmi kartaa in gusaareeye uu u yimaado gurigaaga hooyo ka hor inta aanad helin shimbiraha dhintay iyo ukunta la jajabiyey. Tani waxaa lagu sameyn karaa saldhig dabeecad leh - marka ugu horeysa ee aad soo booqato coop digaag, shimbiruhu waxay ku fadhiisanayaan qoyaankooda mana tagayaan iyaga.
Waa muhiim! Kadib booqasho hal mar ah gurigaaga digaaga, geedka kalluunka ayaa horay u tixgelin lahaa dhulka ayada oo ay u badan tahay inuu mar kale yimaaddo illaa iyo inta aan shimbiruhu ka tegin kadibna uu soo noqdo ka dib markii la soo saaro xoolaha cusub. Sidaa darteed, calaamadaha ugu horreeya ee muuqaalka cayayaanka, tallaabooyinka waa in la bilaabo si loola dagaallamo..
Nasiib darro, booqashada geela marar dhif ah ayaa la qaadaa iyada oo aan dhibanayaasha. Inta badan, milkiilaha coop wuxuu ogaadaa raadinta dhiigga iyo gooynta, boogaha gnawed ee shimbiraha.
Sidee looga takhalusaa feerka
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loola dagaallami karo barooranayaasha. Waad qabsan kartaa, cabsi gelin kartaa, inaad isticmaasho dabinka, dawooyinka dadka, aaladaha khafiifiya. Waxaan soo jeedineynaa in aan tixgelinno mid kasta oo ka mid ah qaababka si faahfaahsan, isagoo fahmay xooggooda iyo daciifnimada.
Ferret waa mid aad u adag in uu keligiis qabsado, sababtoo ah wuxuu yahay mid xariif ah, feejigan oo taxaddar leh, marka laga reebo ilkaha fiiqan iyo cirridka, taas oo dhaawici karta qof. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah siyaabaha loo maareyn karo waa in la qaboojiyo. Waa inaan ilaalinaa habeenkii iyo marka feerka soo baxo, gacanta ku qabso, ka dib markaad ku tuurto jaakad gaboobay ama dhar adag oo gacmo iyo difaac leh gacmo gashi.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u ogaatid sida looga takhaluso jiirka hoygooda.
Waa inay ahaato waqti ka hor si loo diyaariyo kafateeriga xayawaanka la qabsaday. Waxa la samaynayo marka xigta - waxaad go'aansataa. Waxaad isku dayi kartaa in aad rogrogto oo aad ku hayso xayawaan sida xayawaan ama wax kale oo aad ka maareyso, ugu bini-aadanka ah oo ah inaad xayawaan ka qaadato dhawr kilomitir ka socota meesha aad ku nooshahay. Habkani ma aha mid aad loogu kalsoonaan karo, maxaa yeelay ma noqon doonto mid aad u fudud in la xajisto xayawaanka qabta. Intaa waxaa dheer, waxaad ku ordi kartaa xagasha iyo qaniinyada. Hababka nabdoon ee adiga kugu habboon waa dabin iyo dabagal nool.
Bakhaarro khaas ah ayaa lagu iibiyey dabeecado loogu talagalay fureetka iyo weelka. Haddii bahalka hore uu ku sameeyay Laz oo ku yaal coop digaag, markaas dunta ayaa si toos ah loogu rakibi karaa ama ku dhex yaal. Ka hor intaadan gelin, waa inaad ka takhalustaa urka qof, haddii kale xayawaanka ayaa si fudud u heli doona.
Waxaad ka saari kartaa urka adigoo karkarinaya dabka biyo leh cirbado kiriim ah ilaa 30 daqiiqo ama ku daadi digaaga digaaga. Mustaqbalka, dabinka waxaa lagu qaadi karaa oo keliya gacmo gashi.
Sidoo kale, dabinka waxaa la qabanqaabin karaa fiidkii guriga hoyga, iyaga oo daboolaya baalasha shimbiraha. Ama ha ku dhaji tuunta qashinka ah ee bacda digaagga ah. Boogaha ayaa u baahan doona in la nadiifiyo aroortii, sidaa darteed shimbiraha si khaas ah uma waxyeeleeyaan iyaga. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad ka hesho godka geela oo aad dhigto dabin u dhow.
Dareemka nolosha waxaa laga iibsan karaa ama la samayn karaa gacmahaaga. Tani waxay u baahan tahay sanduuq ama sanduuq waxoogaa ka weyn oo ka badan xajmiga yar yar, oo leh qalab furan. Xayawaan ayaa la dhigayaa gudaha - qayb ka mid ah baqashada digaaga ee dhiigga. Albaabka waa in la hagaajiyaa si uu u dhaco xilliga uu gabbaadku galo dabinka.
Waxaa la ogyahay in xitaa ayadoo la adeegsanaayo cayayaanka, ayan suurtagal ahayn in laga saaro cayayaanka oo dhan meel gaar ah. Baro sida loo sameeyo dabin jiir iyo jiir leh gacmahaaga.
Nidaamyo faahfaahsan oo loogu talagalay soo-saarista dabin ee qashinka nool - badan. Tusaale ahaan, waad arki kartaa qaybta wax soo saar ee fiidiyowga.
Video: Qaab dabiiciga ah oo loogu talagalay feerka, mink, jahwareer
Muhiim ma ahan in la qabsado geedka, waxaa ku filan oo kaliya inuu ka soo leexdo qalabka. Waxaa jira dhawr fursadood oo loogu talagalay sida waligeed uga cararaan xayawaanka deyrkaaga.
Hannaanka baqdinta, eeyaha iyo bisadaha waxay noqon karaan caawiyayaashaad. Sidaa darteed, waxaad ku rakibi kartaa guri eey ku dhawaad ​​u dhow dufanka digaaga ama xayawaanka eey u dhow hareeraha horey u sameysay bahal.
Waa muhiim! Waa inaadan isticmaalin sunta si aad ula dagaallanto feerka. Tani waxay noqon kartaa mid khatar ah xayawaankaaga.
Eyga, inta badan, ma awoodi doonto inuu soo qaado cayayaanka, laakiin waxa uu awood u leeyahay inuu isaga bareeyo barking ama ur keli ah. Intaa waxaa dheer, eyga ayaa kuu sheegi doona in marti aan marti ahayn ee barxadda. Koofiyadu sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in laga cabsiiyo feerka, laakiin waa in la fahamsan yahay in iskahorimyada u dhexeeya xayawaanka ay cawaaqib xun ku yeelan karaan xayawaankaaga.
Maanta, dukaamo khaas ah, waxaa jira qalab casri ah oo badan oo u fasaxaya inay gefaan kuwa uurka leh:
iftiin iyo cod.
Baro nuucyada iyo sifooyinka qanjidhada jiirka.
Qalabka Ultrasonic wuxuu saameeyaa xayawaanka adoo soo saaraya dhawaaqyo yar-yar oo aan fiicnayn dhegeysiga geedka. Natiijadu, taasi maaha meel u dhow meesha ay ka timaado ilaha raaxada.
Tusaale ahaan, mid ka mid ah qalabkaan waa "Fox". Tani waa qalab yar oo leh cabbiro qiyaas ahaan 74x118x22 mm. Ka sokow xaqiiqda ah in ay dhalinayso ultrasound-sarreeya, waxaa kale oo uu iftiimiyaa iftiin guduud ah. Badbaadinta dadka iyo xayawaanka raba (marka laga reebo hamsters). Sababtoo ah xaqiiqda ah in joogtada ah ee ultrasound uu si joogto ah isbeddelayo, cayayaanku ma dhicin isaga maandooriye. Soo celinta "Fox" Marka lagu daro ferrets, waxa kale oo ay u dhaqmaan jiirka, jiirarka, jiirarka. "Li" wuxuu ka shaqeyn karaa barta ama batariyada. Ku dul dhejisan dusha sare ama ku xiran derbi.
Qalabka kale ee mabda'a ah ee hawlgalka waxaa loo isticmaali karaa: PR-4, Tornado, Tacsoonada LS 800, WK-600, Chiston-4 Biyoolojiyada Biyoolojiga, Grad A, Greenmill Waxay ku kala duwan yihiin naqshadeynta iyo kala duwanaanta.
Mabda'a hawlgalka ilaysiinta iftiinka-iftiinka wuxuu ku yaallaa iftiinka iyo sanqadha sanqadha marka bahalka uu soo socdo. Waxay ku qalabaysan yihiin dareeraha dhaqdhaqaaqa. Qalabku wuxuu bilaabmayaa inuu shaqeeyo xilliga xayawaanka diirran ee dhiiggu ku yimaado ficil ahaanshaha - farsamooyinka infrared waxuu shaqeeyaa. Ka dib markaa, qalabku wuxuu bilaabmaa inuu abuuro dhawaaq iyo iftiin oo cabsiin kara xayawaanka. Ku shaqee caanaha iyo bateriga. Waxay leedahay cabbir cufan. Kantaroolka noocan oo kale ah waxaa ku jiri kara generator ultrasound. Tusaale ahaan, sida qalabka "Tornado-1200". Soo celinta "Tornado-1200" Waxaa loogu talagalay qiyaas ahaan 1,2 kun mitir murabac. Marka feerka maqlo ultrasound iyo muuqaalka iftiinka iftiinka iyo codadka sare isku mar, waxay dareemeysaa walaac iyo mararka qaarkood xanuun, sidaas darteed waxay isku dayeysaa inay ka baxsato dhulkan.
Tilmaame-yaaca nooca loo yaqaan "repel" ayaa lagu rakibayaa derbiga ama kor ka soo saari kara saqafka. Waxay la timaadaa kontoroolka fog, kaas oo qalabka lagu xakameyn karo gudahooda 6 mitir.
Tixgeli hababka ugu fiican ee xakamaynta jiirarka guriga iyo beerta, iyo sidoo kale inaad la socoto dhammaan waxyaalahaa isticmaalka rodeniga si loo yareeyo jiirka.
Sannado badan oo dagaal ee cayayaan ah, dadku waxay qabsadeen siyaabo kala duwan. Natiijo ahaan, ugu wax ku oolka ah ayaa loo aqoonsaday:
Goosashada roodhiga ee coop. Waxay leeyihiin urin qaas ah, oo aan fiicnayn oo cabsigeliya.
Gubashada derbiyada guriga oo leh tareyn, urta taas oo bahalka uusan u dulqaadan, sidaas darteed ma rabo in uu yimaado qolka.
Diyaargarowga dabagalka fudud: tusaale ahaan, ku dhejinta dher weyn ama baaldi taageero. Qaabka naqshaduhu waa baash. Marka feerka soo dhawaado delicacy delicious, waxay hoos u dhigi doonaa xoogga leh iyo awoodda uu dabooli doonaa.
Hababka ugu caansan ayaa ah kuwo aad u hooseeya oo waxtar u leh aaladaha casriga ah ama dabinka, laakiin waxaa loo isticmaali karaa hab isku mid ah hab kasta oo kale.
Akhri sidii aad u heli lahayd rat, xayawaan, jiir, jiir, jilayaal, abeesooyin, abyaalayaal, jiirarka dacha, iyo sidoo kale baro sida looga takhaluso jiirka guryaha gaarka loo leeyahay.
Sida looga hortago muuqaalka
Qalabka gawracatada ee gogol-xaar u ah qolka digaaga ku nool ayaa laga hortagi karaa. Si sidan loo sameeyo, isticmaal talooyinka soo socda:
Tan iyo markii feerka badiyaa uu gudaha ku soo galo iyadoo la adeegsanayo tunnel, dabaq adag oo la isku halleyn karo ama alwaax, waa in lagu rakibaa biraha.
Waa lagama maarmaan in la hubiyo in aysan jirin dildilaacyo derbi, derbiyada iyo saqafka, si saqafku u yahay mid ammaan ah.
Haddii ay jirto nidaam hawo-qaadid - ku rid shidan si aad uga hortagto in cayayaanku uu ka soo galo daloolka.
Haddii aanay suurtagal ahayn in la sameeyo dabaq adag, waa lagama maarmaan in guriga lagu xareeyo mesh ganaax ah oo aad u baahan tahay inaad ku qodo dhulka ilaa nus mitir.
Kormeer nadiifinta goobta si aysan ferret ugu noolaan meel u dhow guriga xayawaanka guryaha. Guntada qashinka ah, daadinta laamiyayaashii hore waxay soo jiidanayaan hareeraha.
Sidaa darteed, jaleecada hore, ferret jilicsan oo cirifoon leh ayaa waxyeeli kara beerka gaarka loo leeyahay, burburinta qashinka digaaga iyo burburinta digaagga.
Ka hor intaanad bilaabin digaagga, waa inaad ka taxadartaa tallaabooyinka taxadarka ah ee guriga ka ilaalin doona booqashada martida khatarta ah - qalabka dabaqa nabdoon iyo darbiyada, xayndaabka, kafateeriga ama kafateer furan oo leh eyga oo ku dhow hareeraha hoyga shimbiraha, iwm.
Ma taqaanaa? Ferrets ayaa bilaabay in ay guri guri ah dhowr kun oo sano ka hor. Artworks ayaa ka badbaaday ilaa maanta, halkaasoo xayawaankaas lagu sawiray dadka ku hareeraysan xayndaab ama gacmahooda. Predators waxay bilaabeen inay isticmaalaan saaxiibadaa marka ay udagaalayaan bakaylaha iyo burburinta jiirka yaryar.
Haddii uu cadawgu wali ku soo noqdo caado aad u fuulaysid deyrkaaga, waa inaad isla markiiba bilowdid inaad la dagaalanto isaga, samaynta dabinka, xayawaanka raba, ku rakibidda jajabyo gaar ah.